विवस वस्ती बिहिवार, आषाढ २२, २०७४
सुतिसकेको थिएँ, म । दोस्रो प्रहर शुरु हुनै लागेको थियो र मीठो सपना देख्नमा मग्न थिएँ । तर, झ्यालनजिकैको अम्बाको बोटमा एउटा उल्लु कराउन थाल्यो । लाग्यो, उठेर धपाउँ । तर, मनै लागेन । जाबो उल्लुलाई धपाएर, झपारेर र लखेटेर कोचाहिँ महान् ठहरिएका छन् र अहिलेसम्म ?मीठो सपनाको इच्छालाई ङ्याकेर उठेँ र अम्बाको बोटमा एकोहोरो टोलाइरहेका उल्लुतिर नजर पु¥याएँ । अरू बेलाका जस्ता उदास र खिन्न थिएन ऊ । धेरै नै खुशी र प्रफुल्ल महशुस भयो । मैले आफ्नो खुलदुली तत्काल मेटाउन चाहेँ र उल्लुतिर एउटा सवाल सोझ्याएँ, ‘किन ? आज राति त धेरै खुशी देखिएका छौ नि । के भो त्यस्तो ?’
‘हो, खुशी छु आज म ।’ उल्लुले आफ्नै स्वर र शैली पस्किँदै भन्यो ।‘किन ? आजको रात राम्रै आहारा पायौ ?’ मैले सोधेँ । ‘हैन, आहाराभन्दा पनि अझ धेरै खुशी हुनुपर्ने कारण छ । अब हामी उल्लु जातिको पनि राम्रै भलाइ हुने भो । आजसम्म हामीले जेजति रूपमा उपेक्षित जीवन बाँच्यौँ, अब त्यस्तो जीवनबाट मुक्ति पाउने भयौँ ।’ ‘कसरी ?’ मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ ।‘हामी उल्लु जातिको अब उत्थान हुने भो ।’ खुशी हुँदै फेरि अर्को हाँगामा पुग्यो र आफ्नो उल्लुपनको चिनारी गराउँदै कराउन थाल्यो । ‘धेरै नकराऊ । मेरो निन्द्रा खल्बलिन्छ ।’
मैले उसलाई सतर्क गराएँ । तर, उसले मेरो कुरा सुन्न आवश्यक ठानेन र अझ उच्च स्वरमा कराउँदै भन्न थाल्यो, ‘हाम्रो काम नै तपाईंजस्ता सुतुवाहरूका निन्द्रा बिथोल्ने हो, जुन काम हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका छौं । उल्लु जातिको अस्तित्व रहुन्जेल यो काम निरन्तर जारी रहन्छ । तर, आज म तपार्इंको निन्द्रा बिथोल्न चाहन्नँ । एउटा जानकारी मात्र गराउन चाहन्छु ।’
‘छिटो भन ।’ म आजित हुने क्रममा थिएँ । ‘थाहा भो, तपाईंलाई ? हाम्रा लागि, हाम्रो जातिको उत्थानका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । समग्र उल्लु जातिको उत्थानका लागि ल्याइने त्यस्ता कार्यक्रमले निश्चित रूपमा हाम्रो जातिको उत्थान हुनेछ । हाम्रो जाति फल्नेछ, फुल्नेछ ।’‘अरूका मीठो निन्द्रा बिथोल्न पाइरहेका छौ, अँध्यारोमा डुल्दै किरा–फट्याङ्ग्राहरू समातेर खान पाइरहेका छौ । रात–बिरात डुल्ने छुट त छँदैछ । यति हुँदाहुँदै किन तिमीहरूलाई आफ्नो उत्थान चाहियो ? योभन्दा बढी उत्थान अरू के हुन सक्छ ?’ मैले ती उल्लुलाई झाट्न खोजेँ ।
तर, उनी मेरो झटाइँप्रति रत्तिभर डग्मगाएन र उल्टै मतिर प्रश्न बर्साउन थाल्यो, ‘तपाईंहरूले हामीप्रति अहिलेसम्म गर्दै आउनुभएको दुव्र्यवहारको अब परिणाम भोग्नुपर्नेछ । हेर्दै जानोस् ।’ ‘के गर्न सक्छौ ? निन्द्रा बिथोल्नबाहेक ? अँध्यारोमा रमाउनुबाहेक ? आखिर, निन्द्रा बिथोल्ने र अँध्यारोमा रमाउने त तिमीहरूको काम हो नि ।’ निन्द्राले भरिएको आँखा मिच्दै मैले भनेँ ।
‘हाम्रो जातिको उत्थान कार्यक्रम लागु भएपछि तपाईंहरू ढुक्कले सुत्न पाउनुहुन्न । निदहराम गराइदिन्छौं, हामी । तब तपाईंहरूले थाहा पाउनुहुनेछ, उल्लुहरूको तागत र सामथ्र्य । हामीलाई उल्लु भनेर गिल्ला गर्नेहरूलाई पनि हामी गतिलै जवाफ दिनेछौं । समय आएपछि मात्र सबै कुराको छिनोफानो लाग्छ ।’ उल्लुले मसामु ठूलै चुनौती ओछ्याइदियो । र, भुर्र उडेर कतै टाढा गयो । म भने आँखा मिच्न थालेँ ।